Fanapahan-kevitra amin'ny fiainana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Safidy eo amin'ny fiainana
Firy ny fanapahan-kevitra raisinao ao anatin'ny iray andro? An-jatony sa an'arivony? Manomboka amin'ny fifohazana ka hotafiana, amin'ny sakafo maraina, amin'ny fivarotana, amin'ny zavatra tsy ilaina. Fotoana firy laninao amin'ny Andriamanitra sy ny manodidina anao. Tsotra ny fanapahan-kevitra sasany ary tsy mila eritreretina izany, fa ny hafa kosa mila fitandremana tsara. Ny fanapahan-kevitra hafa dia raisina amin'ny tsy fanaovana safidy - ahemorintsika mandra-pahatonga azy ireo tsy ilaina intsony izany na mila hamono azy ireo toy ny afo isika.
Toy izany koa ny eritreritsika. Azontsika atao ny misafidy izay alehan'ny saintsika, inona no hoeritreretina ary inona no hieritreritra. Ny fandraisana fanapahan-kevitra momba izay ho eritreretina dia mety ho mafy kokoa noho ny manapa-kevitra izay hohanina na hotafiana. Indraindray ny saiko mandeha any amin'izay tsy tiako, toa azy irery. Avy eo dia hitako fa sarotra ny mitazona ireo eritreritra ireo ary mamily azy ireo amin'ny làlana hafa. Ataoko fa mijaly noho ny tsy fahampian'ny fifehezana ara-tsaina isika ao amin'ny fampahalalana 24-ora ataontsika amin'ny fahafaham-po eo noho eo. Nanjary nizatra tsimoramora ny elanelam-potoana fohy kokoa izahay mandra-pahatonganay tsy afaka mamaky zavatra raha mihoatra ny andalana na litera efapolo aza.
Hoy i Paoly: “Izaho no velona, ​​nefa tsy izaho intsony no velona, ​​fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo, dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana . 2,20). Ny fiainana nohomboana dia mikasika ny fanapahan-kevitra isan’andro, isan’ora ary eo no ho eo mihitsy aza ny hamono ny tena taloha miaraka amin’ny fanaony ary hamorona ny fiainam-baovao ao amin’i Kristy, izay havaozina amin’ny fahalalana araka ny endrik’ilay Mpamorona azy. «Fa ario kosa izao rehetra izao: fahatezerana, fahavinirana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra aloaky ny vavanareo; aza mifandainga; fa efa notafianareo ny toetra taloha mbamin’ny asany, ary notafinareo ny toetra vaovao, izay havaozina ho amin’ny fahalalana araka ny endrik’izay nahary azy » (Kolosiana). 3,8- iray).
Mitaky asa ny fanakatonana ny antitra, ny ahy taloha (manana iray isika rehetra). Tena ady izany ary mitohy /. Ahoana no hanaovana izany? Amin’ny fisafidianana ny hametraka ny saintsika amin’i Jesosy. “Raha niara-natsangana tamin’i Kristy hianareo ankehitriny, dia katsaho ny any ambony, izay itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra” (Kolosiana). 3,1).
Raha vao avy namaky tao amin'ny fampaherezam-panahy aho dia tsy mila izany isika raha mora izany. Mety ho zavatra sarotra indrindra ataontsika izany. Raha tsy manolotra tanteraka ny tenantsika ho an’i Jesosy isika, ka matoky ny fanampian’Andriamanitra sy ny herin’ny Fanahy Masina ary miantehitra aminy, dia tsy hisy hahasoa antsika. “Dia niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa amin’ny fiainam-baovao” (Romana). 6,4).
Efa nohomboana tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Kristy isika, saingy tahaka an'i Paul dia maty isan'andro isika mba hahafahantsika miaina ny fiainana nitsangana tamin'ny maty miaraka amin'i Kristy. Io no fanapahan-kevitra tsara indrindra amin'ny fiainantsika.
nataon'i Tamy Tkach